IMacOS 12.2 iya kubandakanya isicelo esitsha soMculo seApple | Ndisuka kuMac
Izolo emva kwemini, ixesha laseSpain, abafana baseApple baphehlelele macOS 12.2 Monterey yokuqala beta, i-beta entsha okwangoku ifumaneka kuphela kuluntu lophuhlisi. Nangona ekuqaleni kubonakala ngathi akukho tshintsho lubalulekileyo, khumbula ukuba umsebenzi Ulawulo lukawonke wonke aluyi kufika kude kube ngunyaka ozayo, ewe kukho utshintsho olukhulu.
Kule beta entsha, Apple iye yahlaziya iapp yoMculo kaApple njengosetyenziso lwemveli lweMacOS ukunika amava omsebenzisi angcono. Ukuza kuthi ga ngoku, bendisebenzisa i-webview, ke ibicotha kwaye ibuggy rhoqo.
Kule app intsha yemveli, I-Apple isebenzise i-AppKit, ngoko ke isicelo kufuneka sinikezele ngamava omsebenzisi alula kwaye angenazimpazamo.
I-Apple yakhupha i-app Apple Umculo we-macOS ene-macOS Catalina Ngo-2019, isicelo sazimela kwi-iTunes. IMacOS Catalina yayiyinguqulo ye-macOS eyasusa yonke imikhondo yesicelo esenziwa nguApple kubo bonke abasebenzisi ukwenza iikopi ezigcinayo, ukukhuphela umxholo kwizixhobo, ukulawula umxholo wayo ...
Loo app yaba nje umqalisi wewebhu weapile, ngoko ke amava omsebenzisi ayemahlwempu kakhulu. Ngokuyihlaziya ngokupheleleyo ukusuka ekuqaleni nge-AppKit, usetyenziso luya kufumana ukusebenza okubalulekileyo kunye nozinzo oluphuculweyo.
Kule beta yokuqala, kusenokwenzeka ukuba isicelo isaphosa iifitsha ezimbalwa, imisebenzi eya kongezwa kuhlaziyo olulandelelanayo, ukwenzela ukuba, xa uguqulelo lokugqibela lukhutshwa, abasebenzisi abaqapheli utshintsho, ngaphaya kokuphucula ukusebenza kwayo.
Ngokumalunga nomhla wokukhutshwa kwe-macOS 12.2, kuthathelwa ingqalelo ukuba sisekupheleni kukaDisemba, kunokwenzeka ukuba kude kube sekupheleni kukaJanuwari okanye ekuqaleni kukaFebruwari, inguqulelo yokugqibela ayikhululwa kubo bonke abasebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMacOS 12.2 iya kubandakanya isicelo esitsha soMculo seApple
I-ProMotion isebenza kwi-macOS 12.2 kwaye yenzela amava amnandi eSafari